यी आधिकारिक फोन नम्बर जसले लकडाउनमा तपाइलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ « TechPana | Digging into Tech
बिहीबार, चैत्र १३, २०७६ ०८:५८
इन्ट्री लेबलकै शक्तिशाली स्मार्टफोन रियलमी सीथ्री नेपालमा, यस्तो
यी आधिकारिक फोन नम्बर जसले लकडाउनमा तपाइलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ
यतिबेला सारा देश लकडाउनको परिस्थितिमा छ । सरकारले घरबाहिर ननिस्कन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । चैत ११ देखि १८ गतेसम्म सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । यद्यपि यस्तो लकडाउन थप बढ्न सक्ने संकेत मन्त्रीहरुले गरिरहेका छन ।
लकडाउनमै समस्या परे के गर्ने ? खाद्यान्न सकिएर अभावको परिस्थिती सिर्जना भए के गर्ने ? यस्तो विषम परिस्थितिका लागि केहि हेल्पलाइन तोकिएका छन । ती हेल्पलाइनमा फोन गरेर तपाईं आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ ।
११३७- घरघरमै खाद्यान्न डेलिभरी गर्ने उद्देश्यसहित यो हेल्पलाइन तोकिएको छ । तत्काललाई काठमाडौमा मात्र सिमित गर्ने योजना छ । अथावा गुनासाे गर्न परेमा पनि उक्त नम्बर प्रयाेग गर्न सिकनेछ । साथै बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभाेक्ता स‌ंरक्षण विभागकाे ट्वीवटर, भाइबर(९८५११८०९५९), ईमाे, स्काइप, एसएमएस मार्फत पनि गुनासाे गर्न सिकने छ । ११८०- लकडाउनमा कुनै किसिमको समस्या आयो भने तपाईं यो हेल्पलाइनमा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ ।
१११५- लकडाउनको अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै समस्या देखिएमा यो नम्बरमा फोन गरेर परामर्श लिन सक्नुहुनेछ । ९८५१२५४६६६- नेपालमा रहेका पर्यटक अलपत्र परे यो नम्बरमा फोन गरेर उद्दारका लागि सहयोग गर्न सकिन्छ ।
(नोट: सरकारले हेल्पलाइनका थप नयाँ व्यवस्था गरे यसमै थप गर्दै जानेछौ – सम्पादक)
जूमलाई टक्कर दिने जियोको भिडियो कन्फ्रेन्सिङ एप
एजेन्सी । भारतका धनाढ्य तथा रिलायन्स जियोका संस्थापक मुकेश अम्बानीले भिडियो कन्फ्रेन्सिङको नयाँ व्यवसायमा हात
एपमाथि भारतले लगाएको प्रतिबन्धमा चीनले भन्याे, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया थाल्छौं
काठमाडौं । भारत सरकारले ५९ ओटा चिनियाँ एपमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले
अरु हुँदाहुँदै किन प्रयोग गर्ने कनेक्ट आईपीएस ?
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने एक किसिमको बाध्यता बनेको छ ।
टिकटकसहितका चिनियाँ एपमाथिको भारतीय प्रतिबन्धमा के भन्छ अमेरिका ?
काठमाडौं । भारत सरकारले गएको सोमबार ५९ वटा एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो । यसमा ती एपहरु